Semalt: व्यवसायको लागि सब भन्दा शक्तिशाली एसईओ उपकरणहरू
ई-वाणिज्य बजार मा प्रतिस्पर्धा तीव्र हो, र सबैभन्दा शक्तिशाली कम्पनीहरु को समय समयमा इन्टरनेट मा आफ्नो लोकप्रियता को निरीक्षण गर्न पर्छ।
तसर्थ, त्यहाँ थुप्रै पेशेवरहरू छन् जसले विशाल कम्पनीहरूको लागि वेबसाइटहरू चलाउँछन्, साथ साथै नौसिखिया ब्लगरहरू जसले भर्खर नयाँ पाठकहरूलाई आकर्षित गर्न थालेका छन्।
चाहे तपाईं पहिले नै एक विशेषज्ञ वा एक शुरुआत हो, तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरु कुर्ने छैन। त्यसो भए, इन्टरनेटमा तपाईंको स्थिति सुधार गर्ने पहिलो बन्नुहोस्: एसईओ तपाईंको लागि आवश्यक छ!
वास्तवमा एसईओ एक जटिल प्रक्रिया हो जसलाई थप उपकरणहरूको प्रयोग आवश्यक पर्दछ। पछिल्ला केहि बर्षहरूमा , Semalt ले तपाईको कम्पनीहरु को लागी सान्दर्भिक SEO रणनीतिहरु विकास गर्न सबै भन्दा राम्रो विश्लेषण उपकरण राखेको छ। भविष्य नजिक छ। त्यसकारण, यो निश्चित गर्नुहोस् कि आज तपाईंको वेबसाइटको त्यसमा अग्रणी स्थान छ।
यहाँ सब भन्दा सान्दर्भिक Semalt विश्लेषण उपकरणहरू र रणनीतिहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाइँलाई शीर्ष खोज इञ्जिनहरूमा तपाइँको वेबसाइट प्रमोट गर्न मद्दत गर्दछ: SERP - CONTENT - GOOGLE WEBMASTERS - पृष्ठ गति
SERP (खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठ)
SERP खण्डले वेबसाइट विश्लेषण बुझ्ने उपकरणहरू समावेश गर्दछ। खोजशब्दहरू खोज्नुहोस् जुन तपाईंको वेबसाइटको लागि छ, तपाईंको ट्राफिक ड्राइभि pages पृष्ठहरू फेला पार्नुहोस्, र जैविक खोज परिणामहरूमा तिनीहरूको स्थानहरू निर्धारण गर्नुहोस्। एक सफल पदोन्नति रणनीति निर्माण गर्न आफ्नो प्रतिस्पर्धीको मेट्रिक्स अन्वेषण गर्नुहोस्।
यस रिपोर्टले सबै कुञ्जी शब्दहरू देखाउँदछ जसको लागि तपाईंको वेबसाइट गुगल कार्बनिक खोज परिणामहरूमा, क्रमबद्ध पृष्ठहरू, र उनीहरूको SERP स्थिति विशेष खोजशब्दको लागि।
उप-डोमेनहरू समावेश गर्नुहोस्: तपाईं आफ्नो मुख्य डोमेन र उप-डोमेनहरूको विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ वा तिनीहरूलाई कोर डोमेनको लागि मात्र डाटा निकाल्न बहिष्कार गर्न सक्नुहुनेछ।
खोज इञ्जिन: यी खोज ईन्जिनहरू हुन् जुन तपाईंको वेबसाइटलाई कम्तिमा एक कुञ्जी शव्दको लागि क्रमबद्ध गर्दछ। सूची कुञ्जी शब्दहरूको संख्याको अवरोही क्रममा क्रमबद्ध छ।
परिणामले तपाईलाई देखाउँदछ:
TOP मा कुञ्जी शब्दहरूको स :्ख्या: यस सेक्सनमा, तपाईंसँग एक चार्ट छ जसले समय मा TOP मा कुञ्जी शब्दहरूको संख्या देखाउँदछ। यसले तपाइँलाई कीवर्ड संख्यामा परिवर्तनहरू जाँच गर्न मद्दत गर्दछ जुन वेबसाइट Google मा १.१०० कार्बनिक खोज परिणामहरूको लागि मिल्दछ।
कीवर्ड वितरण शीर्ष द्वारा वितरण: यहाँ, तपाईं खोज्न सक्नुहुन्छ किवर्डहरूको संख्या जुन वेबसाइट गुगल टॉप -१-११०० जैविक खोज परिणामहरूमा छ, अघिल्लो मितिको विपरित।
कुञ्जी शव्दबाट श्रेणीकरण: यहाँ एक तालिका छ जुन Google लोकप्रिय खोजी परिणामहरूमा वेबसाइट पृष्ठहरूको क्रममा सब भन्दा लोकप्रिय कुञ्जी शव्दहरू देखाउँदछ। तपाइँले उनीहरूको SERP स्थितिहरू छनौट मितिहरूको लागि फेला पार्न सक्नुहुन्छ र कसरी परिवर्तन भयो, अघिल्लो अवधिको विपरीत।
तपाईंसँग विभिन्न मापदण्डको आधारमा तालिकामा डाटा फिल्टर गर्ने सम्भावना छ:
एक कुञ्जी शब्द वा यसको अंश
एक URL वा यसको अंश
उदाहरण को लागी, तपाईले सबै पृष्ठहरु फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ जुन शब्द '' खरीद '' समावेश गरी भएको कुञ्जी शब्दका लागि र्यान्क हुन्छ र जैविक खोज परिणाममा शीर्ष -१ स्थान हुन्छ।
यो तालिकाले तपाईंलाई देखाउँदछ:
कुञ्जीशब्दहरू जुन एक वेबसाइटले गुगल कार्बनिक खोज परिणामहरूमा खोजी गर्दछ
तपाइँको वेबसाइट को क्रमबद्ध पृष्ठहरु को URL र एक विशेष खोजशब्द को लागी उनीहरुको SERP स्थिति।
Google TOP मा वेब पृष्ठ स्थिति निर्धारित मितिमा लक्षित कुञ्जी शब्दका लागि।
गुगल खोज ईन्जिनमा लक्षित कुञ्जी शब्दको लागि मासिक खोजहरूको औसत संख्या।
यस सेक्सनमा, तपाई पृष्ठहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाईंको वेबसाइटमा सब भन्दा बढि जैविक साझेदारी गर्दछ। तिनीहरूलाई ध्यान दिनुहोस्: तिनीहरूको पृष्ठमा एसईओ त्रुटिहरू ठीक गर्नुहोस्, अद्वितीय सामग्री थप गर्नुहोस्, र यी पृष्ठहरूलाई गुगल खोजीबाट अधिक जैविक ट्राफिक पाउन प्रचार गर्नुहोस्। यसको भित्र, नतिजाले तपाईंलाई देखाउँनेछ:
समयको साथ उत्तम पृष्ठहरू: तपाई परियोजनाको सम्पूर्ण जीवन चक्रको लागि गुगल TOP मा वेबसाईट पृष्ठहरूको संख्यामा परिवर्तन देखाउँदै एक चार्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसो भए मापनमा स्विच गरेर तपाई डाटालाई एक हप्ता वा एक महिना हेर्न सक्नुहुनेछ।
भिन्नता: यहाँ, तपाईं गुगल TOP 1-100 जैविक खोज परिणामहरूमा पृष्ठहरूको संख्या फेला पार्न सक्नुहुनेछ, अघिल्लो मितिको विपरित।
चयनित पृष्ठ कुञ्जीशब्द तथ्या .्कहरू: यहाँ, चार्टले चयन गरिएको पृष्ठहरू परियोजनाको सम्पूर्ण जीवन चक्रको लागि गुगल TOP मा स्तर निर्धारण गरीरहेको कुञ्जी शब्दहरूको संख्यामा परिवर्तन देखाउँदछ।
यस सेक्सनमा, तपाईले सबै वेबसाइटहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन Google TOP 1-100 मा तपाईंको वेबसाइटको क्रममा मिल्दोजुल्दो कुञ्जी शब्दहरूको लागि। TOP-100 मा सबै कुञ्जी शव्दहरूको संख्या द्वारा तपाइँको वेबसाइटले तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरू बीच कस्तो स्थिति राख्छ भनेर फेला पार्नुहोस्
जान्नुहोस् यदि गुगलले तपाईंको वेबपृष्ठलाई अद्वितीय स्रोत जस्तो व्यवहार गर्दछ वा गर्दैन। यहाँ तपाईं आफ्नो सामग्री विशिष्टताको सटीक प्रतिशत जाँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, पाठको के अंशहरू चोरी भईरहेछन् पत्ता लगाउनुहोस्, र प्राथमिक स्रोतहरूको माध्यमबाट हेर्नुहोस्।
पत्ता लगाउनुहोस् कि गुगलले तपाईंको वेबपेजलाई अद्वितीय जस्तो व्यवहार गर्दछ वा गर्दैन। जहाँसम्म तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईंको सामग्री अनौंठो छ, यो अरू कसैले पनि प्रतिलिपि गरेको हुन सक्छ। र यदि तपाइँको सामग्री संग केहि अन्य वेबपृष्ठ चाँडै तपाइँ भन्दा छिटो अनुक्रमित छ, गुगलले यसलाई सामग्रीको प्राथमिक स्रोत मान्नेछ, जबकि तपाइँको वेबपृष्ठलाई चोरीको लेबल लगाईनेछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि नक्कल वेबपेज सामग्रीको ठूलो प्रतिशतले Google दण्डहरू निम्त्याउन सक्छ।
पृष्ठ विशिष्टता जाँचको मुख्य उद्देश्य
पृष्ठ विशिष्टता जाँच सेवाको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रतियोगीहरू द्वारा चोरी गरिएको सामग्री पत्ता लगाउनु हो, जहाँ लेखकत्व जान सक्दछ, र तपाईंको साइट केवल एक डुप्लिकेट बन्छ र शीर्ष स्थान लिने छैन।
प्रमाणीकरण तीन साना चरणहरूमा लिन्छ। सर्वप्रथम, तपाइँले साइटको ठेगाना, यूआरएल सेक्सनमा, स ,्केत गर्नुभयो भने, तब तपाइँ संकेत गर्नुहुन्छ कि तपाइँ तपाइँको प्रमाणिकरण अन्तर्राष्ट्रिय (google.com (All) - International) गर्न चाहानुहुन्छ वा केवल फ्रान्सेली वेबमा (google.fr (फ्रान्सेली) - फ्रान्स), र अब तपाइँ हरियो CHECK बटन थिचेर प्रमाणिकरण सुरू गर्नुहोस्। हामी यसलाई स्क्यान गर्नेछौं र सबै सेक्सनहरू प्रदर्शन गर्नेछौं।
त्यसो भए, तपाईं एक क्लिकमा कुनै पनि सेक्सन जाँच गर्न सक्नुहुन्छ!
प्राय: खोजी ईन्जिनले यस पृष्ठलाई अद्वितीय मान्दछ। वेबपेज स्थिति SERP मा अनइन्डर्ड बढ्न सक्दछ।
खोजी ईन्जिनले सम्भवतः यस पृष्ठमा रहेको सामग्रीलाई पुनर्लेखित रूपमा लिन्छ। वेबपेज स्थिति बढ्न सक्छ वा कमसेकम खराब हुन सक्दैन। तपाईंको वेबपेज प्रचार गर्नका लागि, अधिक अनौंठो र उपयोगी सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्।
खोज इञ्जिनले सम्भवतः यस पृष्ठमा रहेको सामग्रीलाई साहित्यिक चोरी मान्दछ। स्थितिको विकास सम्भव छैन। तपाईंले आफ्नो हालको सामग्री एक अद्वितीयको साथ बदल्नु पर्छ।
ती सबै भाग पछि, तपाईं पनि आफ्नो परिणाममा दुई मुख्य भागहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जुन:
सामग्री: यहाँ, तपाईं Googlebot दिईएको वेबपृष्ठमा देख्ने सबै पाठ सामग्री फेला पार्न सक्नुहुन्छ। सामग्रीको नक्कल भागहरू हाइलाइट गरियो।
मूल सामग्री स्रोत: यहाँ, गुगलले दिएको सामग्रीको प्राथमिक स्रोतहरू जस्तो व्यवहार गर्ने वेबसाइटहरू यस तालिकामा सूचीबद्ध छन्। त्यसो भए, तपाईं सामग्रीको कुन अंश त्यो वेबसाइटहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ भनेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट गर्नुहोस् कि तपाईं Semalt को टीमलाई भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईंको वेबसाइटको विशिष्टताको लागि समाधानको बारेमा कुनै प्रश्नहरूको लागि।
हाम्रो उपयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस को उपयोग गरी धेरै वेबसाईटहरु प्रबन्ध गर्नुहोस्। गुगलमा तपाईंको डोमेनहरू वा विशेष यूआरएलहरू सबमिट गर्नुहोस् र तिनीहरूको प्रदर्शनहरू सजिलोसँग ट्र्याक गर्नुहोस्। गुगल वेबमास्टर्स सेक्सन पहुँच गर्न गुगल खाता सिर्जना गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
गुगल वेबमास्टर एक सेवा हो जसले देखाउँदछ कि कसरी तपाईंको वेबसाइट गुगल खोजी परिणामहरूमा देखा पर्दछ र अनुक्रमणिका मुद्दाहरूको पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। यस वेबपृष्ठमा, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट र साइटम्यापलाई पूर्ण सूचीको रूपमा बुझाउन सक्नुहुन्छ र Google द्वारा तिनीहरूको अनुक्रमणिका अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्पत्तिले समावेश गर्दछ: परिणामहरू फिल्टर गर्नुहोस् URL वा यसको अंश द्वारा। तपाईं URL हरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन एक खास शब्द समावेश गर्दछ वा सँधै सही URL मेलहरू समावेश गर्दछ।
यी मेट्रिक्सले तपाइँको वेबसाइट कती प्रभावी छ देखाउँदछ। तपाईं तिनीहरूलाई एक निश्चित मिति / समय अवधिको लागि हेर्न र डाटा तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। यस सेवाले तपाइँको वेबसाइट सामर्थ्य र त्रुटिहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ जुन शीर्ष १ मा क्रमबद्ध हुनबाट रोक्दछ
यस ब्लकमा तपाईले आफ्नो वेबसाइटको साइटम्याप गुगलमा बुझाउन सक्नुहुनेछ जुन हेर्नका लागि कुन साईटम्याप ईन्डेक्स गरिएको छ र कुनमा केहि त्रुटिहरू छन्। साइटम्यापको सूची हेर्नको लागि डोमेन चयन गर्नुहोस्।
जाँच गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबपेजको लोड गुगल आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। यहाँ तपाईंलाई अवस्थित त्रुटिहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गरिनेछ साथै तपाईंको साइट प्रदर्शन कसरी सुधार गर्ने बारे सुझावहरू।
किन एक साइट गति महत्वपूर्ण छ?
गति एक वेबसाइट लोड एक रैंकिंग कारक हो। लामो लोडिंग समय नतीजामा स्थितिलाई नकारात्मक बनाउँछ। Yandex र Google छिटो श्रोतहरू मन पर्छ।
इष्टतम लोडिंग समय २- seconds सेकेन्ड हो। आदर्श - प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया समय ०.० सेकेन्ड हो।
आज, प्राय: अनलाइन दर्शकहरूले साइटहरू भ्रमण गर्न मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गर्छन्। र तिनीहरूसँग व्यक्तिगत कम्प्युटरहरू भन्दा सुस्त पहुँच च्यानलहरू र आन्तरिक स्रोतहरू छन्।
सबैलाई थाहा छ कि ढिलो साइट खराब छ। यदि साइट आवधिक रूपमा ढिलो हुन्छ भने, आगन्तुकहरूलाई उनीहरूका कार्यहरू समाधान गर्न गम्भीर समस्याहरू छन्, र त्यसमाथि, यो केवल कष्टकर छ।
तर पनि वेब संसाधनको साथ स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य छ भने, साइट प्रदर्शनमा थोरै ढिलाइले श्रोताको क्षति र रूपान्तरण दरमा गिरावट निम्त्याउँछ।
अनलाइन शपका विशेषज्ञहरूले पत्ता लगाए कि जब डाउनलोड गति १०० मिलिसेप्टिन घट्छ, तिनीहरूको बिक्री तुरून्त १% ले घट्छ।
त्यसकारण, साइट लोड गर्ने गति को समस्यालाई धेरै दिशामा तुरून्त समाधान गर्न आवश्यक छ।
र राम्रो कारणको लागि, Semalt ले यस पृष्ठ गति विश्लेषक उपकरणको विकास गरेको छ साइट र विशेष पृष्ठहरूको गति सम्बन्धी सबै सम्भावित प्यारामिटरहरूको विश्लेषण गर्नका लागि: कसरी यसले काम गर्दछ पत्ता लगाउनुहोस्।
पृष्ठ गति विश्लेषक तपाईको वेबपृष्ठको लोड समयले Google खोजी इञ्जिनको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ कि भनेर निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले फिक्स हुनका लागि त्रुटिहरू पनि पहिचान गर्छ र सुधारहरूको साथ आउँदछ जुन तपाईंको वेबपृष्ठ लोड समयलाई अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
विश्लेषण पछि, तपाईले कम्प्युटर संस्करणका लागि मात्र रिपोर्ट प्राप्त गर्नुहुने छैन, तर मोबाइल संस्करणका लागि पनि।
प्रत्येक परिणामका लागि तपाईले देख्नुहुनेछ:
पृष्ठ लोड समय: पृष्ठ पूर्ण अन्तर्क्रियात्मक हुनको लागि यसले लिने समयको मात्रा।
सफल अडिटहरू: अडिटहरूको संख्या जुन तपाईंको वेब पृष्ठ सफलतापूर्वक पारित भयो।
त्रुटिहरू ठीक गर्न: यी त्रुटिहरू ठीक गर्नाले तपाईंको वेब पृष्ठ छिटो लोड हुन्छ
Semalt को साथ , तपाईं एक नि: शुल्क परामर्श अनुरोध र तपाइँको वेबसाइट कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ: